”कोरोना विरुद्ध लडन सबै नेपाली संघसस्था एकैस्थानमा आउनु पर्छ” पुष्पराज भट्टराई, कार्यवाहक महावाणिज्यदुत - Durbin Nepal News
”कोरोना विरुद्ध लडन सबै नेपाली संघसस्था एकैस्थानमा आउनु पर्छ” पुष्पराज भट्टराई, कार्यवाहक महावाणिज्यदुत ”दुतावास कोरोना पीडित नेपालीको साथमा छ”
बद्रि गौतम १५ चैत्र २०७६, शनिबार २१:५६
कोरोना भाइरसका कारण प्रताडित भएका नेपालीहरु यतिबेला सबैको साथ र सहयोग खोजिरहेका छन । न्युयोर्कमै कोरोनाको प्रभाव अत्यन्तै बढेको अवस्था तथा नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको क्वीन्स नै कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनीरहेको बेला उनीहरुको सहयोग र औषधि उपचारको पनि समस्या देखिएको छ । सहयोग नै नपाउने अवस्था छ । यस्तोे भयावह अवस्थामा नेपाली समुदायको हितमा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दुतावास के गर्दैछ त ? यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कार्यवाहक महावाणिज्य दुत पुष्पराज भट्टराईसंग कुराकानी गरका छौं । प्रस्तुत छ बद्रि गौतमले गरेको कुराकानीको केही अंश :
कोरोनाबाट प्रभावित नेपालीहरुको लागि दुतावासले के गरिरहेको छ ?
अहिले कोर्डिनेसनकै काम भइरहेको छ । अहिले मुख्य समस्या तथ्यांकको छ, कति नेपालीलाई कोरोना भाइरस लागेको छ भन्ने नै जानकारी छैन । कति सामान्य अवस्थामा छन कतिको अवस्था क्रिटीकल छ भन्नेपनि जानकारी छैन सबै अनुमानमात्र आइरहेका छन । यसकारण सहयोग कसरी पुर्याउने भन्ने समस्या छ । यसैले हामीले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी पीडित नेपालीको तथ्यांक निकाल्ने प्रयासमा लागेका छौं । फिप्ना, जनसम्पर्क, प्रवासी नपाली मञ्च एनआरएन जस्ता नेपालीहरुका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसंग पटक पटक छलफल भइरहेको छ । जब तथ्यांक बाहिर आउनेछ तव उनीहरुलाई भौतिक तथा कुटनीतिक कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भन्न सकिएला ।
पीडितहरुको तथ्यांक निकालेपछि कस्तो सहयोग हुन सक्ला ?
जब कोरोनाका पीडितको वास्तविक तथ्यांक आउनेछ तब तीनको बर्गिकरण हुनेछ । सामान्य वा असामान्य, परिवार सहित वा एक्लै, सो अनुुसार यहांको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल हुनेछ । औषधि उपचारको कुरा गर्न सकिएला । राज्यबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाको कुरा गर्न सकिएला । स्थानीय तथा संघीय सरकारबाट कोरोना बाट पीडित हुनेले के कस्ता सेवा सुविधाहरु पउन सक्छन भन्ने कुरा गरी सहयोग ल्याउन सकिन्छ । अर्को तर्फ कतिपय नेपालीहरुले जागिर गुमाएका छन । कतिपय साना साना व्यवसाय गरेकाहरु छन उनीहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । जब हामी तथ्यांक सहित पहल गर्नेछौ तव स्थानीय सरकारले रोजगारी गुमाएका तथा व्यवयास बन्द गरेकाहरुलाई के कस्तो राहत दिन सक्छ भन्ने निक्र्यौल होला । यसको लागि नेपाली वकिलहरु ठुला व्यवसायीहरुसंगपनि छलफल भइरहेको छ । यसबाट एउटा टाष्क फोर्स बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
समस्या बेग्लै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुंदापनि अति प्रभावित क्वीन्सका नेपाली धेरै जोखिममा छन । यसको बारेमा दुतावासले केही गर्न सक्छ ?
हो समस्या धेरै क्वीन्सको हो । अपार्टमेन्टमा बस्ने एक परिवारमात्र होइन, बहुपरिवार बसोवासस गरेको अवस्था छ । एकजनालाई भाइरसले समात्यो भने सबैलाई जोखिम भइरहेको अवस्था छ । यसकारण बेग्लै क्वारेन्टाइनको लागि केही गर्नुपर्ने त हो । तर त्यसमापनि पैसाको कुरा हुन्छ । यसकोलागि नेपाली होटल व्यवसायी, रियलस्टेटका व्यापारी मित्रहरुसंग छलफल भइरहेको छ । अब नेपाली संघसंस्थाहरुको एउटा टास्क फोर्स बनाउनुहोस भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं । त्यसपछि क्वारेन्टाइनको लागि स्थानीय सरकारसंगपनि पहल गर्न सकिएला ।
अनडकुमेन्टेट तथा विद्यार्थी भिषामा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई पनि ठुलो आपत परेको छ नी महावाणिज्य दुतावाससंग सम्पर्कमा आएका छन ?
हो मुख्य समस्या कागजपत्र विहिनहरुको पनि हो । उनीहरुमध्ये कोही कोरोना संक्रमित भपनि सामातिने डरले जचाउन नजाने हुनसक्छ । अथवा विद्यार्थीहरुको भिषाको समस्या हुन सक्छ । त्यसकारण जचाउन नगएका हुन सक्छन । यसैले मैले के आस्वस्त पार्न चाहन्छु भने न्युयोर्क राज्यका गभर्नरलेनै काजपत्र हुने वा नहुने कसैलाईपनि उपचारमा भेदभाव नहुने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । यसकारण उपचार गर्न जांदा वा चिकित्सककोमा जांदा कसैले आइडी माग्दैन । काजगपत्र माग्दैन ढुक्क भएर जांदा हुन्छ । अर्कोतर्फ भिषाको समस्या भएका वा सकिएका विद्यार्थी तथा पर्यटककहरुलेपनि भिषा सकिएमा अनलाइन मार्फत नै अप्लाइ गर्ने र सो को प्रति आफुसंग सुरक्षित राख्न अनुरोध गर्दछु । अर्को तर्फ कानुनी सुनुवाइको पर्खाइमा भएकाहरुले पनि अहिले चिन्ता नलिंदा हुन्छ । किनकी यतिबेला ती सबै न्यायायिक कामहरु यता रोकिएका छन ।
न्युयोर्कमा रहेका नेपाली समुदाय र उनीहरुको पीडादायी अवस्थाबारे नेपाल सरकारले केहि गदैछ ?
यहांको विकराल समस्याको बारेमा हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । यतिबेला नेपालपनि कोरोना भाइरसको जोखिममा छ । नेपालमै कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्ने चिन्ता छ । नेपाल सरकार यतिबेला नेपालमै धेरै केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था छ । हुनपनि पर्यो । यसकारण हामीले यताको अवस्थाको बारे जानकारी गराएका छौं नेपाल सरकारले के गर्ने वा नगर्ने भन्ने त अहिलेनै हामीले कसरी भन्न सक्छौं र ?
अन्तिममा नेपाली समुदायलाई के भन्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त सबै नेपालीहरु सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोला । आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्नु होला । कोरोना भइहालेमा पनि नलुकाउनु होला । एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुहोला तर आफुपनि सुरक्षित रहेरमात्रै । न्युयोर्कमा रहेका धेरै संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले हाम्रो संस्था वा तेरो संस्था नभन्नु होला । सबै एकै ठाउंमा आएर सहयोगमा जुटौं दुतावासको सहयोग रहन्छ । नेपाली कानुनविद, चिकित्कसक, व्यवसायी लगायतका विशिष्ट टोली बनाएर यो समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न लागि पर्नु अहिलेको आवस्यकता हो । नेपालीहरुको सहयोगको लागि दुतावासले सक्दो प्रयास गरिनै हाल्छ ।
१५ चैत्र २०७६, शनिबार २१:५६ मा प्रकाशित